Ahoana ny fomba hanaovana fivoriana AMA mahasarika ao amin'ny YouTube? - YTpals
Ny marketing amin'ny horonan-tsary dia iray amin'ireo paikady ara-barotra malaza sy manan-danja indrindra amin'ny 2022. Tsy misy zavatra mahasarika ny maso toy ny horonan-tsary kalitao. Betsaka ny fahafaha-manao ho an'ny tompona orinasa, matihanina SEO ary mpivarotra haneho ny fahaiza-mamorona amin'ny atiny video. Tsy misy tsy fahampian'ny fahafahana, fa mila mahafantatra ny fomba hanararaotra ireo.
Iray amin'izany ny horonan-tsary AMA na Ask Me Anything. Azonao atao ny mamorona fivoriana AMA mahasarika ao amin'ny YouTube. Amin'ity torolàlana ity, hifantoka amin'ny famoronana ireo horonan-tsary ireo izahay mba hananganana ny fahatokisanao ny marika sy hisarihana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao:
Mamorona lisitr'ireo fanontaniana mety hitranga
Rehefa manomana ny fivoriana AMA ao amin'ny YouTube ianao dia zava-dehibe ny manomboka amin'ny fahafantarana ny mpihaino anao ary mamorona fanontaniana vitsivitsy mifototra amin'ny demografikao. Noho izany, raha manolotra serivisy SEO ny marikao ary ny mpihaino anao dia misy mpivarotra ambaratonga fidirana, te hamorona lisitry ny FAQ momba ny lohahevitra ianao.
Noho izany, mila miomana amin'ny zavatra rehetra ianao. Mijanòna hatrany amin'ireo vaovao farany sy antontan'isa manodidina ny marikao. Ankehitriny, ny zavatra tokana momba ny fivoriana AMA ao amin'ny YouTube dia ny ahafahan'izy ireo mahazo manokana. Alohan'ny fotoam-pivoriana dia tokony hiomana amin'ny fanontaniana manitikitika ianao ary hametraka fetra. Misy fanontaniana mety tianao hovaliana ary misy hafa tsy azonao. Na izany na tsy izany, ataovy mivantana sy fohy ny valinteninao.
Amporisiho ny fivoriana AMA
Tsy tokony handamina YouTube ianao velona Fivoriana AMA amin'izao fotoana izao. Ny fametrahana izany amin'ny mpihaino anao amin'ny minitra farany dia mety hiafara amin'ny horonantsary lava mangina izay tsy misy manontany. Tsy maintsy manomboka ianao fampiroboroboana ny fivoriana haingana araka izay azonao atao mba hananan’ny mpihaino anao fotoana ampy hanomanana fanontaniana tiany hapetraka aminao. Amin'izany fomba izany, dia tsy hikorontana izy ireo amin'ny fieritreretana zavatra. Tianao ho fifanakalozan-kevitra marina sy misokatra ny fotoam-pivorianao AMA, noho izany dia tsy maintsy manome loha-hevitra amin'ireo mpanatrika ianao. Raha mitondra olona akaiky anao ianao dia mety hankafizin'ny olona ny manontany azy ireo mandritra ny horonan-tsary, izay hampitombo ny fiandrasana ny hetsikao.
Ankehitriny, miankina amin'ny hoe horonan-tsary tokana na ampahany amin'ny fampielezan-kevitra fotsiny ny fivoriana AMA YouTube anao, misy fomba samihafa ahafahanao mampiroborobo azy:
Pejy fisoratana anarana
Sehatra media sosialy
Araho ny mailaka
Tsy maintsy miantoka ianao fa ny horonan-tsary AMA dia mifandray. Ary mba hanaovana izany, dia tokony ho azonao antoka fa vonona ny hiresaka aminao amin'ny fotoana tena izy ny mpihaino anao.
Mametraha fanontaniana amin'ny fomba samihafa
Mety manahy ianao sao ho lasa saro-takarina ny fotoam-pivoriana AMA izay tsy hisy fanontaniana hanontaniana anao. Mba hahazoana antoka fa tsy hitranga aminao izany, dia tsy maintsy heverinao fa zava-dehibe ny fomba fametrahanao fanontaniana. Raha tokony hilaza fanontaniana mihidy fotsiny, toy ny hoe—Misy manana fanontaniana bebe kokoa ve?, azonao atao ny misafidy fanontaniana manokana, toy ny—Misy manana fanontaniana momba ny fampielezan-kevitro ho avy? Raha tianao ny hiresaka manokana amin'ny mpihaino anao, dia afaka manomboka miresaka momba ny zava-niainana manokana manan-danja ianao, ary manaraka ny fanontaniana.
Zava-dehibe ny manamarika fa na dia mametraka ilay fanontaniana aza ny mpanatrika, dia azonao atao ny mitarika azy ireo hametraka fanontaniana tianao hovaliana. Amin'ny fanovana ny tenin'ny fanontanianao sy amin'ny fisokafana bebe kokoa dia afaka mahazo olona maro kokoa ianao hametraka fanontaniana.
Noho izany, fomba vitsivitsy ahafahanao mitazona fivoriana AMA mahaliana ao amin'ny YouTube. Raha manahy momba ny isan'ny mpanaraka anao ianao dia afaka manatona YTpals. Miaraka amin'ny tolotr'izy ireo dia afaka mahazo mpanjifa YouTube maimaim-poana ianao, tia YouTube maimaim-poana ary fanehoan-kevitra YouTube maimaim-poana. Raha tianao ny fitomboana haingana sy ny fitomboan'ny tia sy ny fijerinao dia azonao atao ny misafidy ny serivisy premium.
Ahoana ny fomba hanaovana fivoriana AMA mahasarika ao amin'ny YouTube? avy amin'i YTpals Writers, 28 March 2022
Ny torohevitra ambony indrindra momba ny fananganana doka bumper YouTube
YouTube dia iray amin'ireo sehatra marketing matanjaka indrindra ho an'ny marika amin'izao fotoana izao, na inona na inona ny habeny. Manomboka amin'ny marika manandrana manatona ny mpihaino eo an-toerana ka hatrany amin'ireo te-haneho ny tenany…
Fomba 8 hampiasana YouTube hampitomboana ny asanao ara-batana
Aorian'ny Facebook, YouTube no motera fikarohana lehibe indrindra eto amin'ny tontolo virtoaly. Mandefa horonantsary misy mores amin'ny olona erak'izao tontolo izao izy fa tsy ny mponina ao Brezila, Etazonia ary Indonezia mitambatra. Isa-minitra, mihoatra ny…
Manao horonantsary 360 degre ho an'ny YouTube
Tamin'ny volana Janoary 2015 no nanomboka nanamboatra rafitra fanohanana ireo horonantsary 360-degree, izay azo jerena ao amin'ny tranonkala sy ny sehatra finday, ny YouTube. Fihetsika feno fahendrena izany satria ny zava-misy virtoaly dia…